Ama-mobiles aseSpain anenani elingcono lemali | Izindaba zamagajethi
Ama-mobiles aseSpain anenani elingcono lemali
UJoseph Alfocea | | AmaSelula
Uma ucabanga nge- vuselela ifoni yakho endala bese uthola i-terminal enezici ezingcono, ikhwalithi ethe xaxa nokuklanywa ngokucophelela nangokwengeziwe futhi kwesimanje, ngokuqinisekile ubuye wacabanga ngemikhiqizo eminingi. Kepha, uqaphele ukuthi yonke noma cishe yonke le mikhiqizo ivela kwamanye amazwe? Azikho yini ama-mobiles aseSpain okuthi, okungenani, ungafaka njengenketho?
Namuhla sizophakamisa ukukhethwa kwe- Ama-mobiles aseSpain anenani eliphakeme lentengo yekhwalithi. Mhlawumbe ezinye zazo zizwakala zingajwayelekile, kepha-ke, uzokwazi ukuqinisekisa ukuthi zingama-terminals anezakhi zekhwalithi enhle kakhulu, ukusebenza kahle, namanani amukeleka kakhulu azovusa intshisekelo yakho.
1 Weimei amandla 2
2 Amandla Ucingo Max 2+
3 Amandla Ucingo Neo 2
4 I-BQ Aquaris U
Weimei amandla 2
Mhlawumbe ngegama layo ungacabanga ukuthi i-clamp ihambile nokuthi lena yinkampani yamaShayina noma esempumalanga kodwa cha. Weimei unjalo omunye wabakhiqizi bezingcingo bakamuva baseSpain. Isekelwe eMadrid, inhloso yabo enkulu ukunikela amadivayisi wekhwalithi ngamanani amahle. Isibonelo esihle salesi silinganiso samanani entengo asezingeni eliphakeme yi- Weimei amandla 2, i-smartphone eyenziwe ngensimbi futhi itholakala ngemibala emibili (igolide nomnyama) enokwakheka ngokucophelela kwemigqa ebushelelezi, egobile.
Iveza okuhle Isikrini se-intshi se-5,2 ngokuxazululwa okungu-1280 x 720 futhi ngaphakathi kuyo kuhlala u-a I-ARM Cortex A53 quad-core processor ngo-1,45 GHz ephelezelwa yi- I-3 GB ye-RAM y 32 GB wesitoreji ngaphakathi ukuthi singanweba sibonga isikhala salo sekhadi i-Micro SD kuze kufike ku-256GB.
Njengesistimu yokusebenza ine-interface ye-WeOS ngokusekelwe kuyo I-Android 7.0 Nougat. Futhi uma kukhulunywa ngevidiyo nezithombe, ihlanganisa i- Ikhamera enkulu eyi-13 MP enezindlela eziyi-14 zokuthwebula izithombeay a cIkhamera yangaphambili ye-16 MP eyenzelwe ngokukhethekile ukuthola ama-selfies amahle kakhulu.
Asikwazi futhi ukukhohlwa ukuphana kwakhe 4.000 mAh ibhethri ongahlala izinsuku ezimbalwa kude ne-plug, kanye nomsebenzi wayo Ukukhokhiswa kwe-Flip lokho kukuvumela ukuthi wabelane ngebhethri nenye i-terminal.
Ngaphezu kwalokho, i-Weimei Force 2 nayo inikeza ukwesekwa I-SIM yesibili, ukukhanya kwaphambili, umfundi wezigxivizo zeminwe ukuxhumeka kwedijithali kwangemuva 4G, I-Bluetooth 4.0, I-GPS / A-GPS, Ipulaki yejack engu-3,5mm kuma-headphone nezinzwa eziningi ozozijabulela ngokugcwele.
Ungathola kangcono kakhulu ngalesi siginali ku- iwebhusayithi esemthethweni kepha uma ukhetha ukonga ama-euro ambalwa, ungakhetha futhi i- Amandla we-Weimei.
Amandla Ucingo Max 2+
Manje sesiphendukela enkampanini evela kwa-Alicante, eyaziwa ngezipikha zayo, imibhoshongo yomsindo, ama-headphone, amaphilisi kanye nokunikeza amaselula aseSpain ngenani lentengo yekhwalithi emangazayo. Ngikhuluma ngoHlelo Lwezamandla no Amandla Ucingo Max 2+, i-smartphone eklanyelwe ukuhlinzeka nge- "Isipiliyoni se-multimedia ephelele".
Ine- Isikrini esingu-5,5 intshi IPS HD (Amaphikseli ayi-1280 x 720) alungele ukubuka okuqukethwe kwe-multimedia okuhambisana ne- izikhulumi ezimbili ze-Xtreme Sound enikeza amandla amakhulu nomsindo wekhwalithi.
Ifika ne- I-Android 6.0 Marshmallow njengezinga elihlinzekwa amandla yi-53 GHz ARM Cortex A1.3 quad-core processor neMali-T720MP2 GPU, konke kuhambisana I-2 GB ye-RAM ne-16 GB yokugcina yangaphakathi ongayinweba ngokusebenzisa i- ikhadi le-MicroSD kuze kufike ku-128GB eyengeziwe.
Futhi uma ufuna ukuthatha izithombe kanye / noma ukurekhoda amavidiyo, ungakwenza ngenxa yayo ikhamera enkulu ene-13 MP Samsung sensor ifakwe ukugxila okuzenzakalelayo ne-dual tone LED flash; kepha uma ukhetha ama-selfies, i- ikhamera yangaphambili ihlanganisa inzwa ye-Samsung 5 ILUNGU LEPHALAMENDE.
Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla, i-Energy Phone Max 2+ nayo ine-Dual SIM support, i-Bluetooth 4.0, A-GPS, 4G, i-Wi-Fi, i-3,5 mm jack connector, i-3.500 mAh battery, i-FM Radio nezinzwa eziningi.
Amandla Ucingo Neo 2
Kubasebenzisi abaningi, ifoni enesikrini esingu-5,5-intshi iyifoni eningi, futhi bakhetha i-terminal yokusetshenziswa okuyisisekelo futhi abangayisebenzisa ngesandla esisodwa. Ngalokhu, enye yama-mobiles aseSpain anenani elingcono lemali yile Amandla Ucingo Neo 2, futhi yebo, siyaphinda brand.
Ngaphansi kwama-euro angama-70 ungaba nekhwalithi enhle futhi ephathekayo ye-smartphone, ene Isikrini se-IPS esingu-4,5 intshi nesisombululo se-FWVGA (854 x 480 pixels) esihambisana ne- isikhulumi se-Xtreme Sound futhi, njengohlelo lokusebenza, I-Android 6.0 Marshmallow Inikwe amandla yi-53GHz ARM Cortex A1.0 quad-core processor ene-Mali-T720 MP1 GPU, I-1 GB ye-RAM y 8 GB wesitoreji yangaphakathi ongayikhulisa ngekhadi I-microSD kuze kufike ku-128GB futhi 2.000 mAh ibhethri.
Ngokwesithombe nevidiyo, i-Energy Phone Neo 2 inikezela ngefayela le- Ikhamera enkulu ye-5 MP nge-autofocus ne-LED flash, kanye ne- Ikhamera yangaphambili ye-2 MP. Ngaphandle kwalokho, kufaka phakathi izici ezifanayo (i-Dual SIM, i-Bluetooth, njll.), Noma kulokhu kuhambisana ne- izindlu ezimbili ezingeziwe ukuze uhlale usemfashinini.
Ngakho-ke sifika kwabanye abakhiqizi abahamba phambili be- Ama-mobiles aseSpain, iMadrid BQ esinikeza lokhu I-BQ Aquaris U ukuthi singathola futhi enguqulweni plus y Lite cishe ama-euro angamashumi amabili ngaphezulu noma ngaphansi ngokulandelana.
I-BQ Aquaris U iyi-smartphone enayo Isikrini esingu-5 intshi IPS HD (720 x 1280) nohlelo olusebenzayo I-Android 7.1.1 Nougat ehlala iprosesa leQualcomm ngaphakathi I-Snapdragon 430 I-1,4 GHz octa-core ne-Adreno 505 GPU kanye ne I-2 GB ye-RAM, 16 GB wesitorejinoma okwandiswayo kwangaphakathi ngekhadi I-microSD kuze kufike ku-256GB futhi 3080 mAh ibhethri.
Ine- Ikhamera enkulu ye-13 MP Samsung ngesigaba sokuthola i-autofocus (PDAF) ne- Ikhamera engaphambili engu-5MP Ukwazi konke.
Ezinye izinto ezifakiwe yiBluetooth 4.2, GPS, Dual SIM, NFC, 4G
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ama-mobiles aseSpain anenani elingcono lemali
INook GlowLight 3 entsha ifika nesikrini se-inki kagesi
Inhlanganisela ye-graphene nesiliva ingavimbela isikrini sakho se-smartphone ukuthi singaphuli